မော်လမြိုင်၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇
၃။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် သမီးအသက် (၄၀)ပြည့်တော့ပါမယ်ရှင့်။ မျက်နှာမှာတင်းတိတ်တွေ ထွက်လာပါတယ်ရှင့်။ ဘာဆေးသောက်/လိမ်းရမလဲရှင့်။
အရေပြားမှာ အရောင်ရင့် အစက်-အကွက်တွေ ဖြစ်လာတာကို Hyperpigmentation လို့ခေါ်တယ်။ ဒီလို ဖြစ်တာတွေ ထဲမှာ မှဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ်စသဖြင့်ပါတယ်။ အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်တာကလွဲရင် ဒုက္ခမပေးပါ။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ အရောင်က လိုတာထက် ပိုရင့်နေတာပါ။ ဘာမဆို ပိုမကောင်း၊ လိုမကောင်းတာချည်းပဲ။ Melasma (Chloasma faciei) ဆိုတာကို တင်းတိပ်လို့ ပြောရမယ်။
Melanin (မယ်လနင်) ဆိုတာ အရေပြားကို အရောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဆိုးဆေးပါ။ အသားညို၊ အသားမဲသူတွေမှာ သူကများနေတယ်။ အသားမဖြူသူတွေက ပိုကံကောင်းကြတယ်။ (မယ်လနင်) ကနေ နေရောင်ထဲပါတဲ့ ခရမ်းလွန်-ရောင်ခြည်ရန်က အကာကွယ်ပေးနေတယ်။ အဖြူမတွေ Tan ဖြစ်အောင် အဝတ်အစားတွေ ချွတ်နိုင်သလောက် ချွတ်ပြီး နေရောင်ခြည်ချိုးနေကြရတယ် မဟုတ်လား။ (မယ်လနင်) က ဗက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုပိုးကနေ အကာကွယ်တယ်။ အပူဒဏ်၊ ဓါတုဒဏ်တွေကနေလဲ ကာကွယ်မှုပေးတာမို့ ခုခံမှုစနစ်ရဲ့ အပြင်ဆုံးခံတပ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ သူက ဆံပင်မှာလဲ ရှိတယ်။ (အဒြီနယ်-ဂလင်း) နဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာပါ ရှိတယ်။ Melanin မရှိသူတွေကို Albinism လူဖြူလို့ ခေါ်တယ်။ တကိုယ်လုံး အသားအရေ၊ ဆံပင်၊ မျက်လုံး၊ အားလုံး ဖြူဖွေးနေတဲ့သူတွေ။ မျိုးဗီဇပြဿနာတခုပါ။
အရေပြားမှာ အစက်အပျောက်ဖြစ်တာ တရားခံနံပါတ်တစ်က နေရောင်ပါ။ UV rays ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က ဖြစ်စေတာပါ။ ရောင်ရမ်းတာက နောက်အကြောင်းတရား။ ထိခိုက်၊ အနာဖြစ်၊ အပူလောင်၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ နှင်းခူနာဖြစ်၊ Psoriasis လို အရေပြားနာ စတာတွေကြောင့်က တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘဲ အနာကျက်ဘို့လုပ်ရင်း အညိုကွက်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ တခြားလဲ ရှိနိုင်သေးပါတယ်။ Addison’s disease ဆိုတဲ့ Adrenal gland (အဒရီနယ်) အိတ် အားနည်းတဲ့ရောဂါမှာ ဖြစ်တယ်။ လည်ပင်ကြီးရောဂါရှိသူတွေမှာ ၄ ဆ ပို ဖြစ်ကြတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ သိသိသာသာ ၉ဝ% အဖြစ်များတယ်။ ဟော်မုန်းက အဓိကကျလို့ပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အပြောင်းအလဲက လအစ၊ လအလယ်၊ လအဆုံး၊ အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက ဟော်မုန်းတွေ ချည်းဘဲ။ အပျိုဘော်မဝင်သေးရင် အဖြစ်နည်းတယ်။ အိမ်ထောင်ကျ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးဖွါး၊ သွေးဆုံး ဟော်မုန်းတွေ ပြောင်းလဲ မဆုံးပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကို မျက်နှာမြင်တာနဲ့ (မွေးတာ မဟုတ်သေးပါ) သိသာတယ်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့အတူ အဲလိုဖြစ်လာတာကို Chloasma လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့ရဲ့ မျက်နှာဖုံးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ အလှအပ အသုံးအဆောင်တွေကလဲ အဆင်မသင့်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျိုးရိုးကိုလဲ ၃ဝ% အပြစ်ရှာနိုင်ပါသေးတယ်။
• (Hydroquinone + tretinoin + topical steroid) ဆေး ၃ မျိုးရောထားတာက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ 2% Hydroquinone (HQ) creams ကိုအများဆုံးသုံးတယ်။ ဆေးနာမည်တွေက Esoterica နဲ့ Porcelana ဖြစ်တယ်။ Obagi Clear, Glyquin, Tri-Luma နဲ့ Solaquin တွေက 4% creams ဖြစ်တယ်။ အရောင်ရင့်တဲ့ နေရာကို တနေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရတယ်။ ညနေခင်းမှာ ဆေးပေါ်ကနေ Sunscreen လိမ်းသင့်တယ်။ ဒီဆေးနည်းက Epidermal type အမျိုးအစား ပိုကောင်းတယ်။
• Fluocinolone Acetonide ဆေးကတော့ (ကော်တီကိုစတီရွိုက်) ဖြစ်တယ်။ အရောင်လျှောစေမယ်၊ ယားတာ သက်သာမယ်၊ သွေးကြောတွေကျဉ်းစေမယ်။ ဆေးတွေနဲ့မတည့်သူ၊ မျက်စိမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေသူ၊ herpes simplex keratitis, vaccinia, and varicella, mycobacterial infections မျက်စိရောဂါတွေကို မသုံးရပါ။ တနေ့မှာ ၂-၄ ကြိမ်လိမ်းပါ။ ၃-၆ လအထိကြာနိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တပတ် ၃ ကြိမ်သာလိမ်းခိုင်းတယ်။ မျက်နှာ၊ ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်းနေရာတွေဆိုရင် ဆရာဝန်ကမညွှန်ဘဲ မလိမ်းသင့်ပါ။ မျက်စိထဲမဝင်စေရ။ ဆေးအထူကြီး မလိမ်းရ။ လိုအပ်ရင် ဆေးလိမ်းပြီး အပေါ်ကဖုံးထားရမယ်။ Fluocinolone acetonide/Hydroquinone/Tretinoin ခေါ်တဲ့ဆေး ၃ မျိုးတွဲလိမ်းဆေးကို Tri-Luma, Triglow နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။ Melasma တင်းတိတ်အတွက်သုံးတယ်။
• Hydroquinone (HQ) 2-4% ကို အများသဘောတူထားတယ်။ (Alphaquin HP, Alustra, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, Esoterica, Esoterica Sensitive Skin, Glyquin, Glyquin-XM, Lustra, Melanex, Melanol, Melpaque HP, Melquin HP, Melquin-3, Nuquin HP, Solaquin, Solaquin Forte, Viquin Forte) နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။ ဂရုတစိုက်တော့ လိမ်းရပါမယ်။ အရေပြားချွတ်ဆေးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဆေးဖြတ်လိုက်ရင် နဂိုသဘောပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydroquinone 2–4% cream or lotion ညအချိန်လိမ်းပါ။ ၂-၄ လ။ ၂၅% မှာ အရေပြားပါးတာဖြစ်လာတတ်တယ်။ အပြင်းစားကို တာရှည်မသုံးသင့်ပါ။
• Kligman formula ဆိုတာ (Fluocinolone acetonide 0.01% + Hydroquinone 8% + Tretinoin 0.1%) ဖြစ်တယ်။ (SPF) နေ့စဉ် နေရောင်ကာကွယ်နည်းဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နေတဲ့နေရာကို Zinc oxide နဲ့ Titanium dioxide ဆေးတွေနဲ့ဖုံးပေးပြီး နေရောင်ထဲက UV rays (UV-A and UV-B) ကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ Kojic acid or kojic acid dipalmitate ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်။
• Tri-Luma ဆေး ၃ မျိုးတွဲဆိုတာ (Fluocinolone acetonide 0.01% + Hydroquinone 4% + Tretinoin 0.05%) ၃ မျိုး ရောထားတာဖြစ်တယ်။ ၆-၈ ပါတ်အထိသုံးရတာများတယ်။ ဆရာဝန်က မခိုင်းဘဲ ဒိထက်တော့ ပိုမသုံးသင့်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်မှာ မသုံးသင့်ပါ။ (Hydroquinone 4%, Tretinoin 0.05%, and fluocinolone acetonide 0.01%) ၃ မျိုးတွဲလိမ်းဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းရတယ်။ FDA ကနေ လက်ခံတားတယ်။ Tyrosinase inhibitors ဆေးအမျိုးအစားကအဓိကကျတယ်။
2. Mask of pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ တင်းတိပ် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/mask-of-pregnancy.html
3. Skin Problems အရေပြားမှာ အဖြစ်များတာတွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/skin-problems.html